Kenya oo martigelineysa shirka looga hadlayo maalgashiga Somalia | Warfaafiye
Warfaafiye Somali News	Kenya oo martigelineysa shirka looga hadlayo maalgashiga Somalia
Caasimada dalka Kenya ee Nairobi ayaa la shaaciyay in lagu qaban doono shirweyne looga hadlayo maalgashi lagu sameeyo dalka Soomaaliya, waxaana kasoo qeybgeli doona madax kala duwan oo lagu casuumay iyo shirkaddo ganacsi oo caalamka si weyn looga yaqaan.
Shirkan ayaa laguu eegi doonaa fursadaha ganacsi ee ka jira dalka Somalia, kaasoo socon doona labo maalin oo ka bilaabmeysa 12 bisha June ilaa 13 June ee sanadkan.
Shirkan ayaa waxaa soo abaabulay Golaha Dhaqaalaha Somalia (Somalia Economic Forum SEC). waxaana uu sheegay Maareeyaha hay’addan Xasan Dudde uu sheegay in xiligan ay jiraan fursado ganacsi iyo kuwo dib loogu dhisi karo Somalia.
“Shirka maalgashiga Soomaaliya wuxuu fursad bandhig u noqon doonaa shirkadaha isgaarsiinta, gaadiidka dhismaha, beeraha, kalluumeysiga, waxbarashada iyo warshadleyda” ayuu yiri Xasan Dudde.
Xiligan waxaa Somalia ku sugan shirkaddo ganacsi oo ku soo dhiiray magaalada Muqdisho, kuwaasi oo howlo dib u dhis iyo ganacsi ka wada magaalada Muqdisho, waxaana jira shirkado badan oo dhaqaale geliyay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ay ka mid yihiin shirkadaha Coca-Cola, Turkish Airlines, Africa Oil, SKA iyo kuwa kale oo ka howlgalaya caasimadda Soomaaliya.